တစ်ဦးကအမြင့်-ပျံခရီးသွားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လာစေရန်မည်သို့ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > တစ်ဦးကအမြင့်-ပျံခရီးသွားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လာစေရန်မည်သို့
ဒါဟာအိပ်မက်ရဲ့ - အားလပ်ရက်အပေါ်သွားနှင့်ထိုသို့ပေးဆောင်ရ. မသာကြောင်း, ဒါပေမယ့်ရှိ သင့်ရဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ, နေရာထိုင်ခင်း, နှင့်စားနပ်ရိက္ခာများလွန်းသင်တို့အဘို့ paid.
မဖြစ်နိုင်သော, မှန်သော? ကမ်ဘာပျေါတှငျမညျသူမဆိုတစ်ဦး A-list ကိုကမ္ဘာလုံး-trotting စူပါစတား၏ကြီးစွာသော setting သည့်ဂျက်လေယာဉ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်သင်တို့ကဲ့သို့ back-ကုပ်ခြစ်ဘယ်သူမှပေးဆောင်မယ်လို့လမ်းမရှိသော.
မှလွဲ. ... ရှိပါတယ်!
ဒါကမှန်သည်, သငျသညျအခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ Dime အပေါ်ကမ္ဘာကြီးကိုခရီးစဉ်မှာရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည် - ဒါပေမဲ့သင်ကချွတ်ဆွဲထုတ်ဖို့ရိန်းက Man ၏တွေလိုပဲနှင့်အတူအင်တာနက်ကိုသုံးစွဲဖို့ရှိသည်သွားကြသည်.
အကောင်းဆုံးခရီးသွားလာဘလော့ဂါများဟာသူတို့ရဲ့ခရီးသူတို့အဘို့အခွက်တဆယ်အရောအနှောကိုကျေးဇူးတင်ပေးဆောင်ခဲ့ကြ, ကံကောင်းခြင်း, နှင့်ကျွမ်းကျင်မှု - ဤနေရာတွင်သင်ကတူညီတဲ့လုပျနိုငျပုံ.
သင်တစ်ဦးခရီးသွားဗီဒီယိုလော့ဂ်ဂါနေပဲဖြစ်ဖြစ်, ဘလော့ဂါသို့မဟုတ် twitter, ဘာမျှမထားသောစာပိုဒ်တိုများ၏ထိရောက်သောအလှည့် beats. ဒါကခရီးသွားသြဇာကျွမ်းကျင်မှု၏အများဆုံးတွေ့ရခဲသောလေ့လာသင်ယူရန်အဘို့အကအရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်ဖွင့်, စာအရေးအသား.
မှာပုံမှန်ထိုးနှက်မှုတစ်ခုကိုယူ ကောင်းသောမိတ္တူရေးသားခြင်း သင်တို့၏အကြံအစည် scribble မှတစ်နာရီတစ်ရက်ယူခြင်းအားဖြင့်. တစ်ဒိုင်ယာရီသိမ်းဆည်းထားပါ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘလော့ဂ်ရေးဖို့, တီထွင်ခဲ့တယ် Twitter ပေါ်တွင် post - ဤကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သင်၏ကျောအိတ်ကပ်ထဲမှာ, သင်ပိုမိုထိရောက်စွာကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော်ပြနိုင်ပါလိမ့်နှင့်ဝဘ်ပေါ်တွင်သင်တစ်ဦးလူကြိုက်များအောက်ပါအချက်များကိုရရှိနိုငျသောအသံတစ်သံစုံလင်လိမ့်မယ်.
အဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချသွားကြသည် - အဆိုပါ Instagram ကို အသုံးပြုသူအဘယ်သူ၏သာနောက်လိုက်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့မိခင်နှင့်ရုရှားထံမှ bot, Kim Kardashian ကထက်ပိုမိုနောက်လိုက်တွေနဲ့သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးက?
အဖြေရဲ့အသိသာ, သင်အဖြစ်နောက်လိုက်အတွက်ငွေသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးဖြုန်းသင့်တယ်ဘယ်ကြောင့်ဖွင့် သင့်ရဲ့ခရီးစတင်ပါ တစ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လာဖို့.
တူသောက်ဘ်ဆိုက်များကနေနောက်လိုက်ဝယ်ယူ Greedier လူမှုမီဒီယာ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အနာဂတျတှငျအပျေါမှာတညျဆောကျနိုငျသောသမာဓိအခြေခံလောကအတွက်ရန်စံပြနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်.
စက်မှုလုပ်ငန်း blogging အဆိုပါခရီးသွားအပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ပိုပြီးလူတွေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကသွားလာရင်းပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း. သငျသညျနောက်လိုက်နဲ့ content တစ်ဦးအစိုင်အခဲအခြေခံများနှင့်တစ်ပြိုင်နက်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိထားမိဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းရန်သင့်အားစပွန်ဆာနိုင်သူကိုခရီးသွားပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူထိတွေ့ရရန်ဖြစ်ပါသည် အားလပ်ရပ်မှာသွား.
သဘောတူညီချက်ရကျိုးနပ်အောင်, သင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပံ့ပိုးကူညီသင်သည်သူတို့၏လူဦးရေအချိုးအစားသို့တန်ဖိုးရှိသောထိတွေ့မှုနှင့် key နှင့်အတူဤလူများကိုမည်ကိုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်. ဒါက Quid လိုလားသူပိုနေမြဲကျားနေမြဲအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်, မဟုတ်တဦးတည်းကိုသင်ကမ္ဘာကြီးကိုမြင်ရဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟု.
သငျတို့သအတိအကျတော်မူသောသင်တို့သိရန်လိုအပ်ပါအဘယ်ကြောင့်ကြောင်းဖွင့် - သူတို့သင်သည်သင်၏ပရိသတ်ကိုနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်မထင်ကြပါလျှင်, သင်၏အသစ်တွေ့ရှိထားတဲ့စပွန်ဆာရှည်လျားသောအဘို့အလှည့်ပတ်ကပ်မည်မဟုတ် လူဦးရေအချိုးအစား ဖြစ်.
သင်၏ပရိသတ်ရဲ့ပျှမ်းမျှအသက်အုပ်စုတွင်ထွက်ရှာတွေ့ဆိုလိုတယ်, သူတို့ရဲ့အကြိုက်, နှင့်မကြိုက်, အဘယ်အရာကိုက်ဘ်ဆိုက်များကိုသူတို့မှန်မှန်သွားရောက်ကြည့်ရှု, သူတို့ထွက်သွား web ပေါ်မှနေသည့်အခါသူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို. သင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာဤသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏နောက်လိုက်များကိုချစ်အကြောင်းအရာကိုဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ် - နှင့်ဘေးထွက်ပေါ်တွင်သင်၏စပွန်ဆာစောင့်ရှောက်.
သူတို့သညျငါတို့အကြံပေးချက်များများမှာ! သင်တစ်ဦးက high-ပျံခရီးသွားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လာမှမဆိုအခြားနည်းလမ်းတွေစဉ်းစားနိုင်သလား? ထိုအခါကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ကမှတ်ချက်များအတွက်သိစေ!
ကောင်းပြီသင်တစ်ဦး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လာမတိုင်မီ, သင်တစ်ဦးထူးခြားဆန်းပြားအရပ်မှခရီးသွားလေ့ကျင့်နှင့်ကောင်းတစ်လေထုထဲတွင်ကြောက်မက်ဘွယ်ဓါတ်ပုံတွေကိုယူပြီး start ရန်လိုအပ်ပါတယ်, သင်ဖတ်များမှာ? အသုံး တစ်ဦးကရထား Save ဈေးအပေါဆုံးရထားလက်မှတ်တွေရဖို့, ဒါကြောင့်သင့်အသက်တာ၏အလုပ်ဖြစ်လာရန်သင်အများကြီးကုန်ကျမည်မဟုတ်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ဥရောပတိုက်တွင်ကြိုးစားပါမှအကောင်းဆုံးဒေသခံအချိုရည်” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/how-to-become-a-high-flying-travel-influencer/ ‎– (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ ru ဒါမှမဟုတ်နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ TR ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#highflyer #influencer #ခရီးသည် #travelinfluencer